September 13, 2008, 3:15 am Filed under: Lin Let Kyal Sin မမ s0wha1က လတ်တလော ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ဆန္ဒတွေအတွက် TAG လုပ်လိုက်တော့ ဒီအကြောင်းအရာလေးဟာ အထက်တန်းကျောင်းသူဘ၀တုန်းက `ရေးပေးပါ´ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးထဲမှာ သူငယ်ချင်းတွေအချင်းချင်း အမှတ်တရ ရေးပေးခဲ့ကြပုံနှင့် တူညီနေတာကို သတိပြုမိပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မေးပြီး သေသေချာချာ ရေးပေးလိုက်ပါတယ် မမရေ။
ကိုယ့်ဆီ ဖုန်းဆက်ချင်ရင် – ဖုန်းဘေလ်တွေများလွန်းလို့ ဖုန်းတောင်မကိုင်ချင်တော့ဘူးကွယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးတွေက
အချစ်ဆိုတာ – အချစ်စစ်မှန်ခဲ့ရင် အချိုမြိန်ဆုံးသော ဘ၀၏အားမာန်တစ်ခုအမုန်းဆိုတာ – ခါးသီးပြင်းရှအလွမ်းဆိုတာ – အချစ်သစ်ပင်၏အကိုင်းအခက်လေးများသံယောဇဉ်ဆိုတာ – တွယ်နှောင်မှုဘ၀ဆိုတာ – စာသင်ကျောင်းတစ်ခုသူငယ်ချင်းဆိုတာ– ဘယ်အခြေအနေမှာမဆို ကိုယ့်ကိုနားလည်အားပေးတတ်သူချစ်သူဆိုတာ – မိမိနှလုံးသားကို လှပသော သံစဉ်လေးများ ရိုက်ခတ်ပေးနိုင်သူ။ တစ်ယောက်ဘ၀အတွက် တစ်ယောက် မခွဲအတူ ပြီးပြည့်စုံမှု အားမာန်အဖြစ် လက်တွဲတည်ရှိပေးနေသူ။
၄) မောင်လေးထူးမြတ် တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Like this:Like Loading...
ရေးပြီးပါပြီ အမရေ၊ Tag တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခမျ။🙂
Comment by Htoo Myat
September 13, 2008 @ 5:42 am Reply	မလင်းလက်….
ပထမပို့စ်အတွက် ကွန်မင့်ကိုပါ ဒီမှာ ပေါင်းရေးလိုက်ပါတယ်။ စာရေးဆရာဖြစ်ချင်သူဟာ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း စာဖတ်ချင်သူဖြစ်ရမယ်ဆိုတာလေးတွေ့လိုက်ရတော့….ကိုယ်စာဖတ်နည်းတာကို ပိုသတိထားမိသွားတယ်။ စာဖတ်ရမယ်….အဲသည်စကား တကယ်မှန်တယ်။ စာဖတ်ရမယ် (မောင်းတင်လိုက်ပြီ….း-)။ လိုင်ဘရီက ကိုယ့်အိမ်ကနေ ခဲတပစ်အကွာမှဘဲရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် စာဖတ်လိုက်ရင် နှစ်မျက်နှာမကျော်ခင် အိပ်မက်ကမ္ဘာကို ရောက်ရောက်သွားတာကို ကျော်လွှားရဦးမယ်။ စင်္ကာပူမှာ ကျောင်းနေဘူးတဲ့လူတွေ တပန်းသာတာက အင်္ဂလိပ်စာ ပိုမိုကျွမ်းကျင်လာတဲ့အတွက် ကမ္ဘာ့စာပေက စာအုပ်ကောင်းတွေနဲ့ ထိတွေ့လက်လှမ်းမီဘို့ အခွင့်အလမ်းများတယ်။ ကျနော်နဲ့ အခုထိတွေ့နေသူထဲမှာ စာဖတ်နာသူတွေဟာ တခြားသူတွေထက်ပိုပြီး ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းရှိတာ၊ ဗဟုသုတပြည့်ဝတာကို သတိပြုမိတယ်။ ကျနော်လည်း သူတို့ကို အားကျအတုယူပြီး ကျနော့်အကျင့်ဆိုးကို ကြိုးစားပြုပြင်နေဆဲ။ စာများများဖတ်နိုင်ပါစေ။
September 13, 2008 @ 3:41 pm Reply	ကိုပေါရေ Scent Of A Woman အခွေထဲက မင်းသားကြီးမောင်းတဲ့ ကားကို ကြည့်လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီကားလေးဆိုလည်း တော်တော်သဘောကျပါတယ်။ ကျွန်မက ကားအမျိုးအစားတွေ သိပ်မသိတော့ ပြိုင်ကားအနီရဲရဲလှလေးတွေ မြင်တိုင်း သဘောတကျကြည့်မိတယ်။ အဲဒီမင်းသားကြီးလိုတော့ မမြင်ဘဲနဲ့ လျှောက်မမောင်းပါရစေနဲ့😀 ။
စာဖတ်ခြင်းအလေ့နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်မလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တော်တော်စာဖတ်လှပြီ ထင်နေတာ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိချိန်ရောက်မှ အများကြီးလိုနေသေးပါလား သွားသတိထားမိတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သိဖို့က ပထမ ၊ လုပ်ဖို့က ဒုတိယဆိုတော့ ကျွန်မတို့အားလုံး သိသွားပြီး လေ့ကျင့်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်မလည်း Library နဲ့ ဘတ်စ်ကား ၄မှတ်တိုင်လောက်ပဲ ဝေးပေမယ့် သွားတာက ခပ်နည်းနည်း ၊ ၀ယ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်လောက်ရယ် .. အွန်လိုင်းက E-Books တွေပဲ ဖတ်ဖြစ်နေတာရယ်ကို ဆင်ခြင်ပြီး စာများများ ပိုဖတ်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြောနေမိတယ်။ အကြံပြုပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်🙂
September 14, 2008 @ 4:26 am Reply	လွမ်းတေးမဆုံးစေနဲ့ စောသခင် ကို ဘယ်သူရေးတာလဲ မလင်းလက်ရေ. ကြွေထည်ပစ္စည်းတွေကြိုက်တဲ့ မလင်းလက်တစ်ယောက် Ngee Ann City မှာ စိတ်ကြိုက်တော်ဝင်ကြွေတည်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကို မလင်းလက်ရဲ့ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းလေးက ၀ယ်ပေးနိုင်ပါစေဗျားး..
September 15, 2008 @ 2:42 am Reply	လွမ်းတေးမဆုံးစေနဲ့စောသခင်က တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် ရေးတာပါ ကိုရန်အောင်ရေ။ ကိုရန်ပေးတဲ့ဆုနဲ့ အမြန်ဆုံးပြည့်စုံပါစေ🙂
September 15, 2008 @ 2:49 am Reply	ရေးမယ်နော်…။😀 လောလောဆယ် ကီးဘုတ် ကမြင်းနေရတာကို ပို အရသာတွေ့နေလို့ ညီမရေ။ ရေးမှာကတော့ စိတ်ချ။😀
September 15, 2008 @ 4:13 am Reply	လာပြီး ဖတ်ရှု သွားတယ် ညီမလေးရေ။
September 15, 2008 @ 3:17 pm Reply	အပြောချင်ဆုံး စကားတစ်ခွန်းလေးကို ကြိုက်တယ်နော်ညီမလေး လင်းလက်ရေ
September 16, 2008 @ 4:19 am Reply	ချစ်စ၇ာလေး၊ေ၇းထားတာကိုပြောတာနော်…:Plop
September 17, 2008 @ 7:34 pm Reply	ပြိုင်ကားအနီရောင်ကြိုက်တဲ့ညီမရေ ဘာကြောင့်ကားအဖြူကို အနီရောင်ဆိုကောင်းမှာပဲ ပြောတာသဘောပေါက်ပြီဟ။ အလှပဆုံး ၊ အချိုမြိန် ဆုံးသော သံစဉ်တွေနဲ့အမြဲထာဝရ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေဗျာ။
Comment by ဇင်ယော်
October 1, 2008 @ 8:08 am Reply	သိပ်ပေါတာပဲ
October 5, 2008 @ 10:52 am Reply	ပေါတယ်လို့ထင်ပြီး လာဖတ်နေကတည်းက မင်းက ပိုပေါနေလို့ပေါ့ အမည်တောင်မဖော်ဝံ့သူရေ🙂
October 6, 2008 @ 12:37 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI